Laser tingcha na akara nke Automotive Interior Ulo olu - Golden Laser
Label, nrapado, Ngosiputa ihe ngosi
Laser Cutting na akara nke Automotive Interior Ulo olu
Industrylọ ọrụ ụgbọ ala na-eji ọtụtụ ihe eji eme ihe, gụnyere textiles, akpụkpọ anụ, ihe ndị mejupụtara na plastik, wdg. A na-etinyekwa ihe ndị a n'ọtụtụ ụzọ, site na oche ụgbọ ala, ihe eji eme ụgbọ ala, akwa ime ụlọ dị elu na sunshades na airbags.
Nhazi laser CO2 (ịchacha laser, akara laser na perforation nke lasergụnyere) bụ ebe a na-ahụkarị n'ime ụlọ ọrụ ahụ, mepee ohere ndị ọzọ maka ngwa dị n'ime na nke mpụga na imepụta ụgbọ ala, ma na-enye ọtụtụ elele karịa usoro ụzọ ọdịnala. Kpọmkwem na-abụghị kpọtụrụ kọntaktị laser ọnwụ atụmatụ a elu ogo nke akpaaka na-enweghị atụ mgbanwe.
A na-ejikarị teknụzụ na-egbutu laser eme ihe na ụlọ ọrụ ụgbọ ala maka oke nkenke, ọsọ ọsọ, mgbanwe dị elu na mmetụta nhazi zuru oke. Ihe ndị a bụ ngwaahịa ma ọ bụ ngwa ngwa ụgbọ ala maka ime ụlọ na mpụga nke a maara na-arụ ọrụ laser na ahịa.
Ihe mkpuchi ala
Air Myọcha Edge
Na-egbochi mkpuchi uwe
Ngwa akụrụngwa ndị ọzọ
Ngwa bara uru
Ahụkarị ụdị adabara CO2 laser ọnwụ ma ọ bụ na-akanye na akpakanamde ụlọ ọrụ
Textiles, akpụkpọ anụ, polyester, polypropylene, polyurethane, polycarbonate, polyamide, faiba glaasi, carbon eriri mesikwuru composites, foil, plastic, wdg
Gịnị bụ uru nke laser nhazi na akpakanamde ụlọ ọrụ?
Laser ọnwụ nke spacer akwa ma ọ bụ 3D ntupu enweghị distortion
Laser marking nke akpakanamde n'ime ime mkpụbelata na elu na-agba
Laser na-agbaze ma mechie ọnụ nke ihe ahụ, ọ nweghị ihe ọ bụla
Ọcha dị mma ma zuo oke - enweghị nhazi dị mkpa
Laser ọnwụ na laser marking na a otu ọrụ
Oke oke nkenke, ọbụna belata obere ma dị mgbagwoju anya
Ọ dịghị ngwá ọrụ eyi - Laser anọgide na-arụpụta ihe zuru okè
Ngbanwe nke na-agbanwe agbanwe - Laser na-egbutu nha na geometries ọ bụla dịka okike
Usoro laser enweghị kọntaktị, a naghị etinye nrụgide na ihe ahụ
Ntughari ngwa ngwa - na-enweghị mkpa ọ bụla maka ịrụ ọrụ ngwá ọrụ ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe
Anyị na-akwado usoro laser ndị a maka nhazi na ụlọ ọrụ ụgbọ ala:
CO2 Flatbed Laser tingcha Machine
Nnukwu akwa akwa na-agba ọsọ na ihe ndị dị nro na-akpaghị aka ma na-agbada ọsọ ọsọ na osooso kachasị elu.
Galvo & Gantry Laser osise Machine
Galvanometer na XY gantry Nchikota. Oke-ọsọ Galvo laser marking & perforation na Gantry nnukwu-format laser ọnwụ.
CO2 Galvo Laser akara Machine
Fast na nkenke laser marking na a dịgasị iche iche nke ihe. Isi GALVO nwere ike idozi dịka etu i si arụ ọrụ.
Enwere ike iji sistemụ laser iji meziwanye usoro nrụpụta gị? Anyị nwere ike inyere gị aka ịchọpụta site na ịnwale nnwale nke ihe onwunwe gị ma ọ bụ ngwaahịa gị. A nso nke Filiks gụnyere ọnwụ, akara, osise, perforation na nsusu ọnụ-ọnwụ nwere ike rụrụ. Anyị na-enye oge ngwụcha oge mgbanwe, akụkọ nkọwa zuru ezu, yana ndụmọdụ ndụmọdụ sitere n'aka ndị injinia ngwa ọrụ anyị nwere. Ihe ọ bụla gị usoro, anyị nwere ike inyere gị aka ikpebi ihe kasị mma laser ngwọta maka gị ngwa.